Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Tajikistan
Desambra 2013 1 Lahatsoratra Novambra 2013 1 Lahatsoratra Oktobra 2013 2 Lahatsoratra
Jolay 2013 1 Lahatsoratra Febroary 2013 1 Lahatsoratra Desambra 2012 1 Lahatsoratra Novambra 2012 3 Lahatsoratra
Septambra 2012 1 Lahatsoratra Aogositra 2012 1 Lahatsoratra Oktobra 2011 1 Lahatsoratra Avrily 2011 1 Lahatsoratra Oktobra 2008 1 Lahatsoratra Jolay 2008 1 Lahatsoratra Mey 2008 1 Lahatsoratra Avrily 2008 1 Lahatsoratra Marsa 2008 1 Lahatsoratra Janoary 2008 1 Lahatsoratra Desambra 2007 1 Lahatsoratra Tantara misongadina mikasika ny Tajikistan	08 Avrily 2015 Tajik Mpifindra Monina Ao Rosia: Filaharana Ny Fiainana, Avy eo Maty ianao Mpanoratra Farrukh Umari · Rosia 27 Novambra 2014 Mbola Miady hevitra Ny Lafitsara Sy Ny Lafiratsin'ny “Halloween” i Tajikistana Mpanoratra Zukhra Iakupbaeva · Fivavahana 16 Septambra 2014 Salama Tsara Miriaria Miaraka Amin'ny Fianakaviany Ao Toronto, Kanada i Alexander Sodiqov, Mpikambana Ato Amin'ny Global Voices Mpanoratra Chris Rickleton · Mediam-bahoaka Tantara Malaza Indrindra Manerantany 3 andro izayAzia AtsimoMety Ho An'ireo Fiteny Rehetra Any Azia Atsimo Ny Rindrambaiko OCR (Optical Character Recognition) An'ny Google
Tantara mikasika ny Tajikistan 24 Aogositra 2015
Sazian'i Tajikistan ireo mpanakanto mpanitsakitsaka ny lalàm-pifamoivoizana Mpanoratra EurasiaNet.org · Fitantanam-pitondrana Tahaka ireo tanàna Sovietika taloha maro, dia manana kolontsaina fitondrana fiara mivantana avy amin'ny sarimihetsika Fast and Furious i Dushanbe. Mandrisika ny fikivilavilana anaty hafaingan-mpandeha ny lalana feno lavadavaka.
Manamafy Ny Vahohony Amin'ny ” Vaovao” Ny Masoivohom-baovaom-Panjakana Ao Tajikistana Mpanoratra Abdulfattoh Shafiev · Fahalalahàna miteny "Dingana iray goavana hanatràrana ny tsy refesi-mandidy tanteraka!"
Ny Fandosiran'i Qurghonteppa, Midika Fanoneran-keloka Shawshank Ho an-dry Zareo Tajik Mpanoratra Abdulfattoh Shafiev · Mediam-bahoaka Taorian'ny nandosiran'ny mpifonja iray tamin'ny alàlan'ny fiaran'ny lehiben'ny fonja avy any amin'ny tanàna niavian'ny filoha Tajik, noarahabain'ireo mpisera ety anaty aterineto ilay polisy nandà ny tsy hanao lalao maloto.
“Mpaminany Sandoka” Tajik Nalefa Higadra 16 Taona Mpanoratra Abdulfattoh Shafiev · Fitantanam-pitondrana 'Sarotra ny mahatakatra ny antony ambadik'ilay didim-pitsarana. Sufi ilay Sheikh, tsy liana politika, niaina tany an-tendrombohitra tany, tsy nanelingelina na iza na iza...'
Ny Fomba Nahazoan'ny Ankizilahy Iray Mpianatra, “Zanaky”-ny Filohan'ny Tajikistan, Tsolotra Be Dia Be Tamin'ny Olon-tsotra Mpanoratra Farrukh Umari · Fitantanam-pitondrana "Miloka aho fa zanaka mpiasam-panjakana hafa io, satria isika tsy afaka ny hampianatra ireo zanantsika ao amin'io sekoly io mihitsy."
Tajikistan: Natiora Mangatsakatsaka sy Akon'ny Tantara Mpanoratra Abdulfattoh Shafiev · Hevitra Misy aza ny olona sasantsasany no tsy mahalala ny fisian'i Tajikistan. Matiantoka be ry zareo.
‘Hano Ny ***Ako Ry Mp***Reny!': Niteraka Resabe Tao Tajikistan Ilay Mpanolotsaina Voafidy Vao Haingana Mpanoratra Farrukh Umari · Fahalalahàna miteny Raha ompa na teny ratsy no voambolana mba hainao amin'ny fiteny hafa, tsara raha tsy miloa-bava mihitsy.
Tselatra mikasika ny Tajikistan
23 Oktobra 2008Tontolo_iainanaTajikistan: Mihintsan-dravina sy ranom-potaka
Asehoy daholo Tselatra mikasika ny Tajikistan »Araho Twitter